धुलिखेलमै जिपलाइन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ९, २०७५ विद्या राई
काठमाडौँ — धुलिखेल ‘जिपलाइन’ जाने निम्ता म्यासेन्जरमा आयो  । जीवनमै पहिलोपल्ट नाम थाहा पाउँदै छु  ।
के रहेछ ? हतार–हतार गुगल सर्च गरें । साहसिक खेल अर्थात् फलामको डोरीमा घिर्नीको सहायताले विशेष प्रकारको फितामा झुन्डिएर अघि बढ्नु वा उड्नु । कता–कता ढुकीढुकी बढेको भान भयो । डोरीले थाम्ला त ? आफैंलाई सोधें । ‘नथाम्ने भए मर्नलाई निम्ता आउँछ त ?’ आफैंलाई उत्तर नि दिए । निम्ता स्विकारेको रिप्लाई पठाएँ ।
अरनिको राजमार्ग हुँदै धुलिखेलको थाक्लेडाँडा पुगेपछि टिमको नेतृत्व गरिरहनुभएका विष्णुकान्त घिमिरे दाइले भन्नुभो, ‘यो टेक अफ स्टेसन । यहिबाटै हो जिपलाइन सुरु हुने ।’ तलतिर पाँचखालको खावास्थितको डाँडा देखाउँदै थप्नुभो, ‘त्यहाँ ल्यान्डिङ स्टेसन ।’ जिपलाइन मास्टरहरू आवश्यक सुरक्षा तयारीसहित दुवै स्टेसनमा तैनाथ थिए । फलामको डोरी तारजस्तै देखिन्थ्यो आधा भागजति । त्यसपछिको भाग हेर्दाहेर्दै बिलाइहाल्थ्यो । ‘मेरै पालामा पो डोरी चुँडिने हो कि ?’ भित्रभित्रै डर भए पनि बाहिर ठट्टा गर्दै टिममा भने । ‘कसरी चुटिनु ? डोरी कत्रो छ भन्ने त नजिक पुगेर हेर्दा पो थाहा हुन्छ ।’ टिमबाट जवाफ आउँथ्यो । टेकअफ हुने स्टेसन चढ्यौ । साँच्चिकै डोरी त मोटै देखियो । अलि हिम्मत आयो ।
मेरो पालो आयो । हार्नेस बाँधियो । म बीचमै अड्किएँ भने के गर्ने होला ! मुटु ढक्क फुल्यो । मास्टरले मेरो तौल सोधे । ५८ केजी भने । उनले मलाई उत्साहित बनाउन तौल उपयुक्त हुने बताए । मनमा जतिसुकै डर भए पनि अनुहारको चमक सकभर हराउन नदिने सोचमा थिएँ । देव्रे हातमा पञ्जा । दाहिनेमा गोप्रो क्यामरा । मास्टरले अग्लो टेबलमाथि घोप्टो परेको मलाई अगाडिपट्टि बढाउँदै जब एक, दुई, तीन भने । अगाडिपट्टि जोडले हुर्रिसेकेको थिएँ । त्यतिबेला झन्डै तीन सेकेन्डजति सास रोकियो । म आत्तिएँ ।
अघि टेकअफ हुनुअघि ल्यान्डिङमा पुग्न एक मिनेट २० सेकेन्ड लाग्ने भनिएको थियो । कति चाँडै कटिहाल्छ भन्ने सोचेको थिएँ । यसबेला भने आत्तिएकाले होला कतिबेला ल्यान्डिङ गर्ला भयो । लगत्तै मनस्थिति फेरें । डोरीमा स्वतन्त्र रूपले अघि बढिरहेको मैले गोप्रोमा अनुकूलका भिडियो लिएँ । मुनितिर जंगल र गाउँ, पारिपट्टि डाँडाकाडाँ । थाक्लेडाँडा र खावाबीचको दूरी कति चाँडै पार भएछ ।
डर, भय, रमाइलो र आनन्द एकैसाथ । यसैले त हो नि साहसिक खेल भनिएको । यसअघि अन्य साहसिक खेलको अनुभव छ मलाई । तैपनि कता–कता डर लागिरहन्छ । साहसिक खेलपछि आफूमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको अनुभव गर्छु । नेपालमा जिपलाइनका लागि पोखरापछिको गन्तव्य हो धुलिखेल । समुद्र सतहको १३ सय मिटर उचाइमा टेक अफ भएर १२ सय मिटर उचाइमा ल्यान्डिङ हुन्छ । यसबीचको दूरी पार गर्न एक मिनेट २० सेकेन्ड लाग्ने भनिए पनि मानिसको तौल र हावाको वेगमा पनि निर्भर ह्न्छु । २ सय ४० फिटको झुकावमा अघि बढ्छ ।
वर्ल्ड वाइड एड्भेन्चरले हाल निर्माण गरेको जिपलाइन यही फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको हो । सिन्धुपाल्चोकका केदार थापा र काठमाडौंका भुपेश श्रेष्ठको यसमा संयुक्त लगानी छ । युरोपियन र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डमा आधारित भारतीय प्रविधिमा निर्माण गरिएको र शतप्रतिशत सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको अध्यक्षसमेत रहेका केदारले बताए । नेपाल सरकारको नियमअनुसार दुर्घटना बिमा पनि छ ।
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ १२:१९
उता फिलिम हल उँधो गतिमा लाग्दै गयो । यता सुनीलको प्रोजेक्टर तयार भयो । दोस्रो गल्लीमा भर्खरै उठेको किराना पसलको कोठामा फिल्मको पहिलो सो हुने भयो । बजारभरि हल्ला चलिसकेको थियो— सुनीलले प्रोजेक्टर बनाको छ । मान्छेहरू अचम्म मानिरहेका थिए ।
चैत्र ९, २०७५ बुद्धिसागर
काठमाडौँ — दाेस्रो गल्लीमा मान्छे त्यति आवतजावत गरिरहेका थिएनन्  । तीन जना केटा अँध्यारोमा छेलिएका थिए  । तिनले मेरो हात च्याप्प समाए, ‘पैसा ल्याइस् ?’‘अँ,’ म चुइकिएँ । ‘कति ?’ ‘दुई सय ।’ ‘ल आइज’ भन्दै उनीहरू भर्‍याङ उक्लिए । म पछि लागें । मेरो मन रमाइरहेको थियो किनभने म फिलिमको प्रोजेक्टर किन्दै थिएँ, पूरै दुई सयमा ।
बा नुहाउन गएको बेला इस्टकोटबाट झिकेको । उनीहरूले मलाई प्रमोदको कोठामा पुर्‍याए ।
‘को हो ?’ प्रमोदले सोध्यो ।
‘बुद्धि आछ, प्रोजक्टर लिन,’ एउटाले भन्यो । ढोका उघ्रियो । ‘खै ले पैसा,’ प्रमोदले मतिर हात बढायो । मैले दिएँ । ‘ल सबैलाई पचास–पचास रुपैयाँ भाग पर्छ,’ भन्दै प्रमोदले बाँड्यो ।
‘ल तेरो प्रोजेक्टर,’ भन्दै प्रमोदले पलङमुन्तिरबाट तान्यो ।
भन्दिहालुँ– यो प्रोजेक्टर फिलिम हलको जस्तो ठूलो थिएन । ४ सयमा के आउँछ र त्यस्तो ! यो अर्कै प्रकारको प्रोजेक्टर थियो, जसलाई पहिलोपल्ट पहिलो गल्लीको चुरापसले सुनीलले आविष्कार गरेको थियो । र, ऊ सानोतिनो वैज्ञानिकजस्तो लाग्थ्यो, केटाहरूलाई ।
सुनीलले पहिलोपल्ट आफ्नो सानो आविष्कारबारे जानकारी दिँदा म पनि थिएँ । साँझपख उसको चुरा पसलमा कोही थिएन । ऊ ‘कोही न कोही चाहिए, प्यार करनेवाला’ घन्काएर बसेको थियो । हामी फिरीमा गीत सुन्न उसकै दोकानमा जान्थ्यौं । त्यस दिन हामी बजारका सात–आठ जना केटाहरू एकैसाथ उसको दोकानमा पुगेका थियौं । सायद, सुनील यसैको प्रतीक्षामा थियो । उसले गर्वसाथ भन्यो, ‘केटाहरू फिलिम हेर्ने हो ?’
हामी छक्क । कटासेमा एउटै भिडियो थियो, त्यो पनि बन्द भइसकेको थियो । हाम्रो तिर्खा अधुरै थियो ।
‘हेर्ने,’ केटाहरू उत्साही भए ।
‘एक छिन पर्ख’ भन्दै ऊ भित्र गयो । र, सानो पोको बोकेर आयो । त्यसमा अचम्मलाग्दा चीज थिए । टर्चको टल्किने कटौरी । घडी बनाउनेले लाउने आइग्लास । तीनसेले टर्चको बल्ब । र, माटोको लाम्चो–लाम्चो बट्टा । ठ्याक्कै चुरोटको बट्टाजस्तो तर ठूलो । त्यसको पछाडि ठूलो प्वाल थियो भने अगाडि सानो । बीचमा ब्लेडले चिरेजस्तो लाम्चो, चिरो ।
के गर्न लाग्यो यसले ? सुनीलले तीनवटा टर्चका ब्याट्री अट्ने काठको सानो बक्स बनाएको रैछ । उसले पहिला त्यसमा ब्याट्री राख्यो । त्यसबाट निस्केका तार बल्बमा गाास्यो । झिलिल्ल बल्ब बल्यो, आँखै तिर्मिराउने गरी । अनि, उसले माटोको बट्टा समायो । त्यसको पछिल्तिर टर्चको कटौरी टाास्यो । कटौरीमा बल्ब घुसार्‍यो । माटोको बट्टाभन्दा दुई हात पर सादा र ठूलो कागज राख्यो । बट्टाबाट निस्केको प्रकाश कागजभरि छरियो । र, उसले सानो पोकोबाट झिक्यो— फोटोका नेगेटिभजस्ता टुक्राहरू । एउटा नेगेटिभ बट्टाको चिराबाट भित्र छिरायो । कागजमा सानो टिकुली आकारको फोटो देखियो । त्यसमा हिरोहिरोइनको टाउको थियो, उल्टोगरी देखिएको ।
खै के हो के हो ? र, उसले आइग्लास माटोको बट्टाको मुखमा जोड्यो, उल्टोगरी ।
मेरी आम्मै । कागजभरिभरि रंगीन चित्र थियो । हिरोहिरोनीको टाउको सुल्टिएको थियो । मैले त हिरो पनि चिनें— गोविन्दा । पछाडि पहाड थियो । गीतका दृश्यजस्तो थियो । उससित यस्ता नेगेटिभ पन्ध्र–सोह्रवटा रैछन् । उसले सबै माटोको बट्टामा राखेर देखायो ।
हाम्रो त बोली फुटे पो ! हो, यस्तै त हुन्छ नि, ठ्याक्कै फिलिम । यसमा चल्दैनन्, त्यति हो । हामीले ताली बजायौं । सुनील मुसुक्क हाँस्यो ।
‘तिमेरूलाई थाहा छ, यो के हो ?’ सुनीलले नेगेटिभ देखायो । थाहा भए पो !
‘ठूल्ठूलो हलमा फिलिम क्यासेटले चल्दैन । यस्तै रिलबाट चल्छ । यो त एउटा हो । यो त हजार मिटर लामो हुन्छ । आँखै झिम्काएको सिनका लागि पनि यस्ता नेगेटिभ छत्तीसवटा हुन्छन्,’ उसले नयाँ रहस्य खोल्यो, ‘मेरो चाचा, तिकुनियामा फिलिमहलको अपरेटर छ । उसलै दिएको रिलका टुक्रा ।’
वाह, सुनील त कत्ति पहुँच भएको !
भोलिपल्टदेखि कसले हो, हल्लै फिजाएछ । बजारका मान्छेहरू सुनीलकै पसलमा फिलिम हेर्न पुग्न थाले । मैले सुनेको— असइ सापले पनि एकपल्ट उसको प्रतिभा हेरे रे । सुनीलले लगालग पन्ध्र दिनसम्म यसरी फिलिम देखायो ।
तर, के गरोस्, उसको ब्याट्री सकियो । नेगेटिभ पनि नयाँ पाएन । उसको फिलिम बन्द भो । एक दिन उसले भन्यो, ‘थाहा, छ कटासेमा हल आउँदै छ । त्यसबाट काटेको रिल म ल्याउँछु र मान्छे हिँडेको नै देखाइदिन्छु ।’
हामी तिकुनियातिरबाट आएको बुढो अपरेटरसित सम्बन्ध बढाउन चाहन्थ्यौं । ऊ काम नलाग्ने रिल एक दुई मिटर स्वाट्टै काटिदिन्थ्यो । बेलाबेला हामी उसले काटेर फालेका रिल माग्थ्यौं तर ऊ दिँदैनथ्यो । बरु एकबोरा भएपछि जलाउँथ्यो । तर, केही केटाहरूले त चोरेर पनि ल्याउँदा रैछन् । सुनीललाई मिटरौं लामा रिल दिएर हैरान पार्न थाले, ‘तैंले रिल भएपछि हिँड्ने बनाउँछु भन्थिस्, हैन ? अब बनाएर देखा ।’
सुनील रिल लिन्थ्यो र भन्यो, ‘एक हप्तामै हिँड्ने बनाइदिन्छु, हेरिराख ।’
योजनाको बीचमै सुनीलले छोरो पायो । स्वास्नी बिरामी भई । ऊ लगनसहित व्यापार गर्न थाल्यो । उसले आफ्नो प्रोजेक्टरतिर ध्यानै दिन पाएन ।
एक दिन उसले भन्यो पनि, ‘म दुई–तीन महिना बिजी छु । त्यसपछि काम सुरु गर्छु । तर एउटा चीज चाहिएको छ । त्यो फिलिमहलको प्रोक्टरमा हुन्छ, जसले रिललाई घुमाउँछ । त्यो चाहिएको छ, ल्याइदिने हो ?’
एक–दुई जनाले जसरी भए पनि ल्याइदिने वाचा गरे । नयाँ अपरेटर आएपछि केटाहरूलाई प्रोजेक्टर रुमसम्म पुग्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । अब केटाहरूले दाँते चोर्न सक्ने स्थिति नै भएन । उनीहरूले सुनीललाई समस्या सुनाए ।
‘भैगो,’ सुनीलले भन्यो, ‘मान्छे हिँड्न नसक्ने प्रोजेक्टर नभएर के भो ? ठूलो पर्दामा देखिने बनाइदिन्छु ।’ र, ऊ प्रोजेक्टर बनाउने रातो माटो खोज्न खोलाका डिलडिल हिँड्न थाल्यो । उसले प्रोजेक्टर बनायो पनि । तर, उसलाई समस्या दुई कुराको भएछ । ठूलो बल्ब र ब्याट्रीको ।
एक दिन उसले भन्यो, ‘केटा हो, टर्चको बल्बको रोशनीले पुग्दैन । बसको हेडलाइटको बल्ब चाहिन्छ । त्यो बल्ब बाल्न ब्याट्री चाहिन्छ । ब्याट्री त मसित छ तर त्यसमा राख्ने तेजाव छैन ।’
बसपार्कमा करिब १२ बस र ट्रक थिए । आज एउटाको सिकार हुनेवाला थियो । टोलीमा म पनि थिएँ तर फिल्मको भीडमा नाच्ने कोरसजस्तो ।
एउटा केटो बसमा खलासी छ कि छैन, चेक गर्न गएको थियो । अर्को पुलिस आउँछन् कि भनेर चनाखो भइरहेको थियो, पुलछेउ ।
बस चेक गर्न गएको केटो फर्केर आयो । ‘ऊ त्यो नीलो बसमा कोई छैन,’ उसले सासले भन्यो, ‘त्यसको निकाल्न सजिलो हुन्छ । कसैले थाहा पाए, अँध्यारै–अँध्यारो जंगलतिर भाग्न हुन्च ।’
केटाहरूले मुन्टो हल्लाए । ‘को जान्छ ?’ कसैले सोध्यो । सबैले एकपल्ट एकआपसमा हेराहेर गरे । प्रमोदले आँटसहित भन्यो, ‘म जान्छु । तर क्यै पर्‍यो भने बचाउन आउनु ।’ सबैले मुन्टो हल्लाए । प्रमोदले भुइँबाट ढुंगो टिप्यो । र, लोखर्केझैं दगुर्‍यो ।
फिलिममा अचानक ठूलै रहस्य खुल्दा आउने ‘सन्नाटा’ झैं पूरै सन्नाटा । एक छिनपछि ठूलो आवाज आयो– झर्‍याम्म्म्म्म्म ।
लौ, प्रमोदले बसको अगाडिको एउटा आँखामा हिर्काइहालेछ । आवाज आउनासाथ केटाहरू तर्सेर जंगलतिर दगुरिहाले ।
‘को हो बस फुटाल्ने ?’ बसको मान्छे त होला दगुर्दै आइहाल्यो, ‘एक–एकलाई काट्छु । आज कटासेमा रगतको खोलो बग्छ ।’ केटाहरू झन् बेस्मारी दगुरे । म पनि छाती फुट्नेगरी दगुरिरहेको थिएँ । बसपार्कमा ठूलै हल्लाखल्ला भइरहेको थियो । प्रमोद धूलोपिठो भइसक्यो कि के हो ?
केटाहरू ठूलो सालको रूखमुन्तिर लुके । वरिपरि सालका पोथ्रापोथ्री थिए । कोई चुइँक्क बोलिरहेको थिएन । करिब दस मिनेटपछि भ्यात–भ्यात कोही दगुरेको आवाज आयो । पुलिस हो कि क्या हो ?
‘को हो ?’ एउटा केटोले सुस्त सोध्यो ।
‘म,’ प्रमोदको आवाज आयो । ए, केटो त सही सलामतै रैछ । ऊ स्याँस्याँ गर्दै नजिक आयो । एक छिन आफ्नै घुँडातिर झुकेर लामो–लामो सास फेर्न थाल्यो ।
‘मासालेहरू,’ प्रमोदले घुटुक्क थुक निल्दै भन्यो, ‘भाग्ने ? खलासीले झन्नै समाको थ्यो । झन्नै मारेका थे ।’ कोही केटा बोलेनन् । प्रमोदले सास फेरिरह्यो ।
‘ल्याइस् ?’ एउटाले मधुरो स्वरमा सोध्यो । प्रमोद बोलेन । उसले पाइन्टको गोजीतिर हात लग्यो । र, जतनसाथ बल्ब निकाल्यो । केटाहरूले ताली बजाए । एक–दुई जनाले प्रमोदलाई उचाले पनि । त्यही रात सवा नौ बजेतिर दुई नम्बर गल्लीको अँध्यारो कुनामा सुनीललाई बल्ब हस्तान्तरण भयो । सुनीलले बल्ब समाउौँ मज्जाले हेर्‍यो— हीराको टुक्रा हेरेझैं । उसले अनुहार पुछ्ने रुमालमा पोको पार्दै सर्टको गोजीमा हाल्यो र भन्यो, ‘माँ कसम, यस्ले त सारा कटासे उज्यालो हुन्छ । एउटा पर्दाको के कुरा ?’
सूर्यका किलाजस्ता तिखा किरण तालुमा गडिरहेका थिए । पसिना तरतरी बगिरहेको थियो । सुनील र म छत्तिवनको जंगल हुँदै आइरहेका थियौं । मेरो साइकल सुनीलले हाँकिरहेको थियो । म पछाडि क्यारियरमा बसेर तेजाबको बोतल समाइरहेको थिएँ । बोतलको टाउकोमा चप्पलको टुक्रा कोचिएको थियो । त्यसमाथि प्लास्टिक बाँधिएको थियो । मेरो हत्केला चिसो–चिसो भइरहेको थियो । म सुनीलको गफमा रमाउँदै हातमा लागेको चिसो पाइन्टमा पुछिरहेको थिएँ । सोचिरहेको थिएँ— हत्केला भिजेको त पसिनाले होला ।
‘मैले प्रोजेक्टर बनाएँ भने कटासेमा मेरो इज्जत बढ्छ,’ सुनील भनिरहेको थियो, ‘मलाई चुरा बेच्ने मात्र ठान्छन् र हेप्छन् । म मेरो प्रतिभा देखाउँछु अब ।’
मैले मुन्टो हल्लाएँ तर उसले के देखोस् !
म ज्वरो आयो भनेर स्कुल गको थिएनँ । सुत्त साइकल लिएर निस्केको थिएँ । भरे बाको झापड त खानै थियो । साइकल जमराखोलानेर आइपुग्यो । मेरा हत्केला किला बिझेझैं दुखिरहेका थिए । मैले हत्केला सुघें । थाहा पाएँ— मेरा हत्केलाभरि पसिना होइन, तेजाब पो लागेको रैछ ।
‘साइकल रोक, म हात धुन्छु,’ म कराएँ । सुनीलले साइकल रोक्यो । म तेजाबको बोतल भुइँमा राखेर खोलातिर दगुरें । पानीमा हात डुबाएँ । हात त झर्लान्झैं गरेर दुख्न थाले । हत्केलाका छाला बेसारझैं पहेंलै भएका थिए । म बालुवाले घोटीघोटी हात पखाल्न थालें । हात त झन् चर्किन पो थाले । आँसु नै आयो । हात धुँदै गर्दा लाग्यो— भतभती जलिरहेका हत्केलाका छाला होइनन् । आगो त छालाको भित्रपट्टि पो थियो ।
‘के भो ?’ सुनील छेउ आयो ।
‘तेजाबले हात खायो,’ म कराएँ । उसले मेरा हत्केला च्याप्प समायो र नियाल्यो । उसको अनुहार अँध्यारो भयो । तेजाबसित खेल्ने त उही हो । सबै कुरा उसैलाई थाहा होला । उसले रिसाउँदै भन्यो, ‘अघि नै भन्नुपर्दैन ? तेजाब त भित्रै पसिसकेछ ।’
‘मैले त पसिना हो भन्ठानेको ।’
‘पसिना र तेजाब पनि थाहा हुँदैन ?’ ऊ मुर्मुरियो, ‘अब तिम्रा हत्केलाका छाला सप्पै उक्किन्छन् । पैले भन्नुपर्दैन, ढिला भो ।’
म घुक्क गर्दै रोएँ । खोलामा हत्केला डुबाइरहें । चिसो पानीले अलिकति राहत दिन्थ्यो । जब हात बाहिर निकाल्थें, चरक्कै दुख्थ्यो । ‘चिसो बालुवा मुठीमा कस,’ सुनीलले भन्यो । मैले खोलाभित्रको बालुवा अञ्जुलीमा उठाएँ र बेस्मारी च्यापें । अलिकति चिसो भयो । एक छिनपछि त्यसले पनि काम गर्न सकेन । अनुहारभरि चिटचिट पसिना निस्क्यो । पिसाब आउला–आउला जस्तो भो । मूर्च्छै पर्छु कि जस्तो भो । सुनील आत्तियो, ‘ल, छिटो घर हिँड ।’
म उठें । ‘के भाको तिम्रो पाइन्ट ?’ सुनीलले मेरो तिघ्रातिर इसारा गर्‍यो । मैले आत्तिंदै हेरें । मैले नीलो जिन्स लगाएको थिएँ । मैले हात पुछेकै ठाउँमा गाढा नीलो रङ खैरो–खैरो भएको थियो । मैले त्यो ठाउँ सुम्सुम्याएँ । कपडा एकदमै नरम भएजस्तो लाग्यो ।
यसो चिमोटेको त अलिकति कपडा धूलैधूलो भएर औंलाभरि आयो । ए बा, तेजाबले त पाइन्टै खाएछ । यसरी नै मेरा हात पनि झर्छन् कि के हो ? मैले फेरि पाइन्ट चिमोटें । भ्वाङ पर्‍यो ।
सात्तै गयो । म साइकलतिर दगुरें । सुनीलले तेजाबको बोतल त्यतै बेसरमको झ्याङमा लुकाएर आयो, ‘त्यो त म पनि समात्दिनँ । पछि आएर लैजाउँला ।’
साइकलको हेन्डिल मेरा जलिरहेका हत्केलामा सुम्पेर ऊ दोस्रो गल्लीतिर दगुर्‍यो र मोडबाट अलप भयो । म साइकल डोर्‍याउँदै घरतिर मोडिएँ । हेन्डिल समाएका मेरा हत्केलालाई सयौं सर्पले ठुँगिरहेका थिए ।
आमा दोकान अगाडि हुनुहुन्थ्यो, मैले वरैबाट देखें । आमाले पनि देख्नुभो । साइकल डोर्‍याउँदै हतारिँदै आएको देखेर तर्सिनुभो । ‘काँ मर्‍या थिस् ?’ आमा बम्किनुभो, ‘फेरि के बिठ्याइँ गरेर आइस् ।’
मैले साइकल अड्याउन पनि सकिनँ । साइकल फुर्लुंग पल्टियो । दुवै हत्केला देखाउँदै कराएँ, ‘पोल्यो, पोल्यो ।’
‘मेरी आम्मै, क्यारेर आइस् ?’ आमा छट्पटिनुभो, ‘ल हेर, हातै छैनन् त ।’ मेरा आँसु बर्बरी झरे, ‘तेजाबले हो ।’
‘तेजाब ? हे भगवान्, फेरि काँ तेजाबमा हात डुबाउन पुगेछ यो त !’
त्यही बेला बा मेडिकलभित्रबाट निस्कनुभो । एकपल्ट आमा र मतिर हेर्नुभो । र, सोध्नुभो, ‘किन कराइछेस् ? के भो ?’
‘हात हेर्नुस् हात,’ आमाको त सात्तै गएजस्तो थियो, ‘सप्पै डढाएर आछ । तेजाबमा डुबाएछ हात ।’ बाले मेरा हत्केला हेर्नुभो । अनुहार अँध्यारो भो । मेरा हातका हस्तरेखा भुक्क फुलेजस्ता भएका थिए । मलाई आफ्नै हत्केला हेर्न पनि डर लागिरहेको थियो ।
‘ब्यान ज्वरो आयो भनेर सुतेको होइन ?’ बाले आमातिर हेर्नुभो, ‘यसले पनि हैरान पार्‍यो ।’
‘टीकापुर गाथें, सुनीलसित,’ मैले भनिहालें, डर लाग्यो ।
‘संगत हेर न संगत,’ आमा कराउनुभो, ‘यसले त जिन्दगीभरि रुवाउने भो ।’ बाले केही भन्नुभएन । भित्र लैजानुभयो । सुरुमा एउटा ट्याब्लेट दिनुभो, ‘यो खा, दुख्न कम हुन्छ ।’ मैले कर्‍याक–कर्‍याक चपाएँ । अनि, बाले मेरा हात डिटोलले सफा गर्नुभो । मल्हम लगाइदिनुभो । पट्टी बाँधिदिनुभो । म बिरामी सुत्ने पलङमा पल्टिएँ । राति सुत्दा पनि हात दुखिरहेको थियो ।
बिहान ब्युझँदा हत्केला दुखी नै रहेका थिए । राति आधा छाला नै उक्केछन् । छालाको भित्रपट्टिको मासु प्रस्ट देखिइरहेको थियो । तर, त्यसमा ढुसी लाएजस्तो भएको थियो ।
हत्केलाको पुरानो छाला बिस्तारै उक्केर गए । अनि, हत्केलामा लागेको ढुसी हरायो । अनि, बिस्तारै हत्केलामा नयाँ छाला पलायो । म ठीक भएँ । तैपनि, हत्केलाका भाग्यरेखाहरू यताउता सरे कि, के थाहा ?
म केही दिन सुध्रें । उता सुनीलले लगनसाथ प्रोजेक्टर बनाउन थाल्यो । एक दिन हुर्रिएर सारा कटासे उडाउनेगरी हुरी आयो । झरी पर्‍यो । झरी थामिइसकेपछि थाहा भो ‘फिलिम हल’ को छाना नै उडाएछ । छाना नबन्दासम्म रातिको सो मात्र चल्ने भो । दर्शकहरूले फिलिमसित आकाशका तारा पनि हेर्न पाउने भए ।
पछिल्लो समय हलमा राम्रा फिलिम आउन छाडेका थिए । जति आउँथे, सबै बीचमा रोकिन्थे । पाँच छपल्ट रिल चुँडिएपछि एउटा फिलिम पूरा हुन्थ्यो । दर्शकलाई टेन्सन हुन थालिसकेको थियो । रुपेडियातिर ढुसी परिसकेका फिल्म र रिल कटासे ल्याउँदा यस्तो भाको रैछ ।
उता फिलिम हल उँधो गतिमा लाग्दै गयो । यता सुनीलको प्रोजेक्टर तयार भयो । दोस्रो गल्लीमा भर्खरै उठेको किराना पसलको कोठामा फिल्मको पहिलो सो हुने भयो । बजारभरि हल्ला चलिसकेको थियो— सुनीलले प्रोजेक्टर बनाको छ । मान्छेहरू अचम्म मानिरहेका थिए । मंगलबार थियो । सवा पाँच बजे दोस्रो गल्लीमा भीड बढ्यो । सबै टिकट काटेर सुनीलको मनोबल बढाउन चाहन्थे । म सोच्थें— पार्टनर त म पनि हुँ ।
म गएँ । टिकटको मूल्य पाँच रुपैयाँ तोकेका रैछन् । केही केटाहरू ढोकामा बसेर पैसा उठाइरहेका थिए । मैले ढोकाबाट चियाएँ— भित्र बीस–पच्चीस जना दर्शक भइसकेका रैछन् । बाहिर दुई चार जना थिए । म भित्र पस्न खोजें । एउटा केटोले रोक्यो, ‘टिकट काट ।’
‘म पार्टनर हुँ ।’
‘केको पार्टनर, सारा बजार पार्टनर भएर हुन्छ ?’ एउटाले भन्यो, ‘खुरुक्क पाँच रुपैयाँ लेऊ ।’ यै प्रोजेक्टरका लागि तेजाब ल्याउँदा झन्डै डुँडो भाथें । मन चसक्क दुख्यो । सुनीलसित पछि कुरा गर्छु । म सुनीलको प्रोजेक्टर हेर्न आतुर थिएँ । पाँच रुपैयाँ दिएर भित्र पसें ।
सुनील अगाडिपट्टि झुकेर तार जोड्दै थियो । म कुनातिर बसें । केटाहरूले भित्तामा सिरकको छेउलो (खोल) बनाउने कपडा टाँसेका रैछन् । ठ्याक्कै हलको पर्दा । दर्शकमा बजारका केटा र केही किराना पसलका साहु थिए । सबैको अनुहारमा कौतूहल थियो । तार जोडेर सुनील निधारको पसिना पुछ्दै उठ्यो । सारा दर्शकतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्यो ।
दर्शकहरू सबै भित्र पसिसकेछन् । ढोका बन्द भो । मेरो ढुकढुकी बढ्यो— कस्तो देखिएला है । अँध्यारो भएपछि मुखमा बलिरहेको टर्च च्याप्दै सुनील पछाडितिर दगुर्‍यो । एकै छिनमा पर्दा उज्यालो भएर आयो । ठ्याक्कै फिलिम हलको झैं पछाडितिरबाट प्रकाशपुञ्ज आएको थियो ।
अनि, देखिए पर्दामा हिरोहिरोनीका अनुहार । पछाडि डाँडापाखा । ठ््याक्कै फिलिमहलको झैं ठूला फोटा देखिएका थिए । सबैले ताली बजाए । सुनील उत्साही भयो । पर्दामा ख्यार्र–ख्यार्र चित्र परिवर्तन हुँदै गए । करिब दसवटा फोटा देखिँदासम्म त रमाइलै भइरहेको थियो । एघारौं फोटामा कुनातिरबाट आवाज आयो, ‘ओई, खै त मान्छे हिँडेको ? फोटा मात्रै देखाउनी ?’
‘यस्तै हो,’ सुनीलले भन्यो ।
‘यस्तै रे ?’ एउटा केटो जुरुक्क उठ्यो, ‘म त साँच्चिकै फिलिम होला भनेर आको । यसरी नि ठग्न हुन्छ ? मेरो पैसा फिर्ता चाहियो ।’
‘बिक्री भइसकेको टिकट फिर्ता हुँदैन,’ ढोकामा बसेको केटाले जवाफ दियो, ‘बस्, एक छिनमा फाइटको फोटो
पनि आउँछ ।’
‘मैले खत्रा–खत्रा हलमा फिलिम हेरिसकेको छु,’ केटो झन् बम्कियो, ‘उल्लु बनाउनी । पाँच रुपियाँ के तेरो बाउले दिन्छ ?’ एक छिन सन्नाटा छायो । र, प्वाच्च आवाज आयो । केटो नाक समाउँदै थुचुक्क बस्यो । रगतै आएछ । त्यसपछि होहल्ला मच्चियो । अँध्यारो कोठाबाट भीड बाहिर सडकमा निस्कियो । हानाहानै भएछ । केवल ड्याम्म डुम्म, प्याच्च पुच्च आवाज आयो । कले कलाई हानिरहेको थियो, थाहा छैन । मैले पुलुक्क हेरें— सुनील ढोकाछेउ बसेर पसिना पुछिरहेको थियो ।
उसको इज्जत त गई नै सकेको थियो । पुलिस आए भने त बर्बाद हुन्छ । म सुत्त भीडबाट निस्कें र घरतिर कुदें ।
केटाहरू आफ्नो हातमा परेको सय–सय रुपैयाँ देखेर रमाइरहेका थिए । म रमाइरहेको थिएँ— प्रमोदले पलङमुन्तिरबाट झिकेर देको प्रोजेक्टर देखेर । सबै सामान एउटा कार्टुनमा थियो । मैले कार्टुनभित्र चियाएँ– ब्याट्री, बल्ब, कटौरी, रिलका डल्ला र माटोको लाम्चो बट्टा । मैले मुन्टो हल्लाएँ ।
‘ल अब प्रोजेक्टर तेरो भयो,’ प्रमोदले मसित दह्रो हात मिलायो । मैले हाँस्दै कार्टुन उठाएँ । १२ किलो जति गह्रुंगो रैछ । बाहिर अँध्यारै भइसकेको थियो । म भुस्याहा कुकुरलाई छल्दै घर पुगें । मेडिकल बन्द भइसकेको रैछ । ढोका उघारेर भित्र पसें । पुराना कार्टुनको बीचमा लुकाएर राखें । बाहिर निस्कनै थालेको थिएँ— भूतझैं झुस्स दाइ आइपुग्यो ।
‘साले दुई सयमा थोत्रा भाँडा किनेर ल्याइस् ?’ दाइ बम्कियो, ‘मैले चौराहमा सुनें । पख्, बालाई भन्दिन्छु ।’ लौ, दाइले थाहा पाइसकेछ । मैले हात जोडें, ‘दाइ, प्लिज कसैलाई नभन् । म मटेरामा लगेर फिलिम देखाउँछु । माँ कसम पैसा फिर्ता ल्याउँछु ।’
मैले दाइलाई जीवनमा पहिलोपल्ट हात जोडेको थिएँ । दाइ खिस्स हाँस्यो । समस्या टर्‍यो ।
‘के रे फिलिम हल ?’ डिल्लीका आँखा ठूल्ठूला भए, ‘साँच्चिकै फिलिम हल ?’
‘साँच्चिकै त होइन । तर, उस्तैउस्तै हो,’ मैले भनें, ‘ठ्याक्कै फिलिमहलकै जस्तो फोटा देखिन्छ ।’ हाफटाइमको बेला थियो । डिल्ली र म कक्षाकोठामै थियौं । ‘काँबाट ल्याइस् ?’ डिल्लीका मसिना आँखीभौं बीचमा खुम्चिए । ‘मैले आफैं बनाको,’ दुई सय तिरेको भन्यो भने डिल्लीले जति हल्ला कसले फैलाउने ? ‘आफैं बनाइस् ?’ डिल्लीको आवाज ठूलो भयो ।
‘अँ, त्यै भएर पालबजारमा फिलिम देखाऊँ भनेको,’ मैले भनें, ‘टिकटबाट आएको पैसा बाडौंला । पार्टनर बनौं ।’
‘पार्टनर ?’ डिल्लीको अनुहार डुब्न लागेको घामको किरण अनुहारमा परेझैं रातो भयो, ‘हुन्छ । कहिले देखाउने फिलिम ?’ मैले सोचेर भनेको त होइन तर मुखबाट निस्किहाल्यो, ‘पर्सि । फिल्म देखाउने ठाउँ खोज है, अलि अँध्यारो ।’
‘हुन्छ,’ डिल्लीले एक छिन सोचेर भन्यो, ‘दिदीको गोठ छ । हुन्छ ?’ म खिस्स हाँसें ।
शनिबार । मंसिर अन्तिम साता । कटासे मधुरो तुँवालोले ढाकिएको थियो । दिक्दारलाग्दो दिन थियो । अगेनाको डिलमा बसेर मैले रोइकराइ गरेर आमालाई फकाएँ र मटेरा जान पाउने भएँ ।
‘तैपनि, एकपल्ट तेरा बालाई पनि सोध् ।’ आमाले भन्नु भो ! ‘हुन्छ’ भन्दै म तल झरें । बा मेडिकलमै हुनुहुन्थ्यो । मैले सोध्ने आँट गर्न सकिनँ । मलाई थाहा थियो— बाले जा भन्दै भन्नुहुन्न । मैले सोचें— सुटुक्क टाप कस्छु । भरे आमाले भन्नुभन्दा अघि म मटेरा पुगिसकेको हुनेछु ।
म यताउता घुमिरहें । साइकलमा प्रोजेक्टर राखेर हिँड्दा त बाले थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो । बा कति बेला बजारतिर निस्कनुहोला, र म भागूँला भनेर कुरिरहें । सवा दुई बजिसकेको थियो— मलाई छटपटी भइरहेको थियो । भगवान्ले प्रार्थना सुन्छन् भनेको सत्य रैछ । पढिरहेको किताब थन्काउँदै बाले चप्पल लगाउनुभो । बाहिर निस्कनुभो । मेरो अनुहार उज्यालो भो ।
‘एई, फेरि के बिठ्याइँ गर्न खोज्या छस् ?’ बाले मतिर हेर्नुभो । बालाई कत्ति कुराको ज्ञान पहिल्यै हुन्छ । त्यसैले त ‘बा’ भनेको होला नि !
‘केई नाइँ,’ मैले भनें ।
बाले एकपल्ट आकाशतिर हेर्नुभो र चप्पल पड्काउँदै जानुभो । चोकमा पुगेर दोस्रो गल्लीतिर मोडिनुभो । क्या बात, मेरो राजमार्ग खुला थियो । प्रोजेक्टर राखेको कार्टुन अनाआवश्यक ठूलो थियो । सानो र चिटिक्कको औषधिको कार्टुन छानेँ र पालैपालो सामान राख्न थालें ।
मैले साइकलको क्यारियरमा कार्टुन बाँधें । ह्वात्त चढें र कुदें । मटेराले मलाई कुरिरहेको थियो । डिल्लीले बाटो हेरिरहेको होला । गाउँभरि फिलिमको हल्ला चलाइसकेको होला । कटासेको पुल कटेर घना जंगलमा पसिसकेपछि म कल्पनाको संसारमा दौडिरहें । मेरो कस्तो इज्जत हुने होला है मटेरामा ! टन्न मान्छे आउलान् । पर्दामा ठूलो रंगीन हिरोहिरोनीको फोटो देखेर क्या रमाउलान् ! वाह !
म मटेरा पुग्दा डिल्ली अमौरीखोलाको पुलमाथि उभेर बाटो हेरिरहेको थियो । मैले खुसी हुँदै वरैबाट साइकलको घन्टी बजाएँ । डिल्ली एक खुट्टामा उभेर नाच्यो । गाईगोरु वनबाट फर्किरहेका रैछन् । पुलछेउ गोठालाको भीड थियो । म छेउमा पुगेपछि एउटा गोठालोले सोधिहाल्यो, ‘फिलिम कति बेला चलाउँछौ ?’
‘छ बजे,’ मैले भनें ।
‘ल म गाईगोरु गोठमा बाँधेर आउँछु,’ उसले भन्यो । ऊ पहिलो दर्शक थियो । मैले याद गरें— थोत्रो सर्ट र थोत्रो पाइन्ट लगाएको थियो । खाली खुट्टा । जिङरिंग कपाल बढेको । ‘टिकटको कति ?’ उसले अल्लि पर पुगेर सोध्यो । ‘पाँच रुपैयाँ,’ मैले सानले भनें । अरू गोठाला ट्वाल्ल परेर मलाई हेरिरहेका थिए । मैले डिल्लीको छेउमा साइकल रोकेँ । हर्षित ऊ नजिक आयो । उसले एक छिन कार्टुनलाई नियाल्यो र मुसुक्क हाँस्यो, ‘यसमा छ ?’
म हाँसें । डिल्लीले पालबजारतिर दगुर्दै भन्यो, ‘मैले सारा गाउँमा हल्ला फिजाइसकें । टन्न मान्छे आउँछन् । आइज, समान दिदीकोमा राखौं ।’
मैले डिल्लीलाई पछ्याएँ । मैले दिदीको चियापसल अगाडि साइकल रोकें । चियापसलमा टन्नै मान्छे थिए । हाम्लाई विज्ञान पठाउने यादव सर पनि रैछन् । नीलो लुंगी र सेतो सर्ट लगाएका थिए । कपाल तेलले चपक्क कोरेका थिए । सर मटेरा बस्छन् भन्ने थाहा थियो, यसरी टुप्लुक्कै भेटिएलान् भन्ने त लागेको थिएन ।
मैले साइकल अड्याएर यादव सरलाई नमस्ते गरें ।
‘त के ल्यायौ बुद्धिराम ?’ सरले सोधे । मलाई लाज लाग्यो । डिल्ली मोरो कराई त हाल्यो, ‘फिलिम देखाउने प्रोजेक्टर ल्याछ सर । आफैं बनाको रे ।’
‘आफैं बनायौ बुद्धिराम ?’ सर छक्क ।
‘अँ सर,’ मैले मरेको आवाजमा भनें । ‘कतिबेला देखाउँछौ ?’ सर हाँसे ।
‘छ बजे,’ मैले कार्टुन चियापसलको भित्रपट्टि राख्दै भनें । दिदी चिया उमाल्न व्यस्त थिइन्, पुलुक्क हेरिन्, क्यै भनिनन् । ‘तिमी त प्रतिभाशाली रैछौ, बुद्धिराम । फिलिम हेर्न भागिरहन्थ्यौ । प्रोजेक्टरै बनाएछौ,’ सर उत्साही भए, ‘म पनि आउँछु हेर्न ।’ भनेपछि भोलिदेखि मेरो कक्षाकोठामा इज्जत बढ्ने भयो ।
डिल्लीको घरमा पुगेर हामीले मकै, रोटी र साग खायौं । पाँच बजिसकेको थियो । डिल्लीले उत्साही हुँदै भन्यो, ‘जाम्, फिलिम हेर्ने मान्छे आइसके होलान् ।’
म हाँसें । तर, हाँसो त गइहाल्यो । मैले त पर्दा नै ल्याउन बिर्सेछु । किनौंला भन्दै थिएँ, भुसुक्कै भएछु । म ङिच्च हाँसें, ‘मैले त पर्दा नै ल्याउन बिर्सेछु । तेरोमा सेता कपडा छैन ?’ डिल्ली गम्भीर भयो । ‘सेता कपडा । ठूलो चाहिन्छ,’ मैले ऊतिर हेरें । पर्दाकै कारण फिलिम नचल्लाजस्तै भो त ।
‘त्यस्तो कपडा त छैन,’ डिल्ली दाल चलाइरहेकी आमाले नसुनून् भनेर मौरीझैं मेरा कानमा भुन्भुनायो, ‘तर, एउटा आइडिया छ ।’
‘सिरकको छेउलो हुन्छ ?’ उसले भन्यो, ‘हिजै आमाले धुनुभाको छ ।’
‘हुन्छ हुन्छ,’ म उत्साही भएँ ।
‘तँ जाँदै गर । म सुटुक्क लिएर आउँछु ।’
म लुसुक्क बाहिर निस्कें । साइकल डोर्‍याउँदै मूलसडकमा निस्किएँ । सडकछेउको अग्लो रूखमुन्तिर साइकल अड्याएर पिसाब फेर्न थालें । डिल्ली खेतका कान्लैकान्ला दगुरेर आइरहेको थियो । उसको हात खाली थियो तर उसको पेट घैंटाजत्रो देखिइरहेको थियो । झ्वाट्ट हेर्दा डिल्ली ठूलो ढुंगो गुल्टिरहेजस्तो लाग्थ्यो ।
एकै छिनमा ऊ स्याँस्याँ गर्दै मेरो छेउमा आइपुग्यो । उसको ज्यान मरेको भैंसीको ज्यानजस्तै फुलेको थियो । उसले घुटुक्क थुक निल्यो । अटेसमेटस भएको सर्टको बटन खोल्यो । सिरकको छेउलो पटुकाझैं पेटमा बाँधेको थियो । खोल्यो र पट्यायो ।
‘ल चाँडै फिलिम देखाम्,’ डिल्लीले छेउलो क्यारियरमा राख्यो र त्यसमाथि बस्दै भन्यो, ‘बाआमा सुत्नुअघि नै सिरकको छेउलो राखिदिनुपर्छ ।’
पालबजार पुग्दा एक–दुई जना केटाहरू हाम्रै बाटो हेर्दै रैछन् । हाम्लाई देखेर हाँसे । मैले पुलछेउको गोठनजिक साइकल रोकें । गोठ वरै गन्हाइरहेको थियो । बाख्राहरू कराइरहेका थिए । भर्खरै बनाएजस्तो थियो, गोठ । स्याउलाको छाना थियो ।
‘म पर्दा लाउँदै गर्छु । तँ कार्टुन लेर आइज,’ मैले डिल्लीलाई भनेर छेउलो बोकेर भित्र पसें । मेरी आम्मै, भित्र त झन् कस्तो गन्हाको हो । कराइरहेका बाख्राहरू मलाई देखेर एक छिन चुप भए । ट्वाल्ल परे र फेरि कराउन थाले । दायाँपट्टिको कुनामा बड्कौंलाको थुप्रो थियो । भुइँभरि पिसाबको ताल ।
मैले पिसाबको तालबाट जुत्ता जोगाउँदै सोचें— पर्दा अगाडि राख्छु । प्रोजेक्टर पछाडि । तर, समस्या थियो । पर्दा र प्रोजेक्टरको बीचमा बाख्रैबाख्रा । म मेसो मिलाउँदै थिएँ, कतिबेला हो, छेउलो भुइँमा लत्रिसकेछ । यसो हेरेको त्यसको एकछेउ त बाख्राको पिसाबले भिजिहालेछ ।
आज डिल्लीले कुटाइ खाने भो । म छेउलोमा लागेको पिसाब झट्कार्न खोजिरहेको थिएँ, त्यही बेला कार्टुन बोकेर डिल्ली पस्यो ।
उसले यताउता हेर्‍यो, ‘खै त पर्दा लाको ?’
‘एक्लैले सकिनँ ।’ उसले कुनामा कार्टुन राखेर सोध्यो, ‘कहाँ लाउने ?’
मैले अगाडिको भित्तो देखाएँ । डिल्ली छेउलो समात्न आयो । मैले पिसाबले भिजेको फेर समाएर अर्को फेर उसलाई दिएँ । ठसठस कन्दै डोरीले बाँधेर पर्दा लगायौं । बाख्राहरू भित्तामा फैलिएको सेतो कपडा देखेर आत्तिंदै जोडजोडले कराउन थाले । म हाँसें— क्या भाग्यमानी बाख्रा, फिलिम हेर्न पाउने भए ।
‘बाहिर मान्छे आइसके,’ डिल्लीले भन्यो, ‘तँ भित्र मिलाउँदै गर । म बाहिर बस्छु ।’
मैले कार्टुन खोलेर प्रोजेक्टर जोड्न थालें । एक छिनमा प्रोजेक्टर तयार भयो । मैले ब्याट्रीमा तार जोडें । झिलिक्क गुलुप बल्यो । त्यसको उज्यालो प्रकाश माटोको बट्टा हुँदै आइग्लासमा पसेर छेउलोमा ठोक्कियो ।
‘डिल्ली मान्छे पठाइदे,’ म कराएँ । एकै छिनमा होहल्ला गर्दै सात जना केटाहरूभित्र पसे । बाख्राबाट जोगिंदै उभिए । एक दुई जनाले नाक छोपे । तैपनि उज्लायो पर्दा देखेर मख्ख परे । एउटाले सोध्यो, ‘कति मिनेटसम्म चल्छ ?’
‘पन्ध्र मिनेट ।’
केटाहरूले कौतूहलपूर्वक सेता पर्दा नियालिरहे । म अझै अरू दर्शकको आसमा थिएँ । त्यही बेला डिल्लीको आवाज आयो, ‘यादव सर आउनुभो ।’
म अलिअलि डराएँ । अलिअलि खुसी भएँ । यादव सर भित्र पसे । उनले एकपल्ट सबैतिर नियाले । अनि, हाँस्दै भने, ‘बुद्धिराम, तिम्ले त ठ्याक्कै फिलिम हल बनाएछौ ।’
म लजाएँ ।
‘अब चलाऊ फिलिम,’ सरले आदेश दिए ।
‘डिल्ली आइज, फिलिम सुरु गरौं,’ म कराएँ । डिल्ली डल्लेभूतझैं स्वात्त भित्र पस्यो ।
अब सुरु हुन्छ फिलिम । केवल रिल राख्नु त हो । सेतो पर्दा रंगीन देखिनेछ । मैले कार्टुनमा हात छिराएँ । छुलुक्क पिसाब निस्कियो । मूर्च्छै पर्छुजस्तो भयो । कार्टुनमा रिलको डल्लो थिएन । हतारमा मैले रिल हाल्नै बिर्सेछु । मलाई आफ्नै गोडामा उभिन गाह्रो भयो ।
‘एक छिन बाहिर आइज त,’ मैले डिल्लीको कानमा भनें । डिल्ली अलमलियो । मैले उसको हात समाएर बाहिर तानें र दर्शकलाई भनें, ‘एकै छिनमा सुरु गर्छु है ।’
बाहिर पालबजारमा टुकी बलिसकेको थियो । चिसो–चिसो हावा चलिरहेको थियो । तर मेरो मुटु त अग्निकुण्डमा खसेर सेकुवा भइरहेको थियो ।
‘डिल्ली, मैले त रिल कटासेमै बिर्सेछु ।’
डिल्ली थरर्र काँप्यो, ‘मैले त पैंतालीस रुपैयाँ उठाइसकें । यादव सरले पनि दिनुभो ।’
कटासे पुगेर रिल ल्याउने कुरा थिएन । के गर्ने होला ? आकाश खस्दै आएर मेरो तालु चेप्न थाल्यो । अचानक मेरो दिमागमा झिल्का उठ्यो । मैले भनें, ‘डिल्ली, तँसित प्लास्टिक छ ?’
‘दिदीको पसलमा छ,’ उसले भन्यो ।
हामी दिदीको पसलमा पुग्यौं । किताबको खोल हाल्नेजस्तो सेता प्लास्टिक ल्यायो डिल्लीले । मैले कैंची मागें र रिल आकारमा काटें । कलमले त्यसमा चित्र बनाएँ । मान्छेको । जंगलको । गाईको । मैले १० मिनेटमा पच्चीसवटा जति चित्र बनाएँ । लामो सास फेरें र डिल्लीलाई भनें, ‘हिँड्, फिलिम सुरु गरौं ।’
हाम्लाई देख्नासाथ दर्शकहरू उत्साही भए । म प्रोजेक्टरछेउ टुसुक्क बसें । मलाई त केवल आइडिया आएको थियो । आइडियाले कत्तिको काम गर्छ ? प्लास्टिकमा कोरेका चित्र पर्दामा कसरी देखिएलान्, मलाई थाहा थिएन । मैले लामो सास फेरें र मान्छेको टाउको बनाएको प्लास्टिक प्रोजेक्टरमा छिराएँ । वाह, म त अचम्मै । मैले कोरेको चित्र पर्दामा क्या खत्रा देखियो ।
मैले फेरि अर्को प्लास्टिक राखें । वनजंगलको चित्र पनि राम्रै देखियो ।
‘खै त फिलिम ?’ एउटा केटो करायो, ‘यो के देखाको ?’
‘यै त हो फिलिम,’ म हाँसें, ‘पर्दामा देखेनौ ?’
‘धर्कैधर्का छन् त्यहाँ,’ केटो जंगिहाल्यो, ‘साले ठग, मेरो पैसा फिर्ता दे । नत्र दाँत भाँचिदिन्छु ।’ मेरा हातगोडा काँपे । यादव सर पनि अल्मलिइरहेका थिए । होस्, पैसा फिर्ता गर्नैपर्‍यो । भोलि बरु रिलै ल्याएर देखाउनुपर्ला । मैले डिल्लीलाई पैसा दे भनेर इसारा गरें । डिल्ली तर्सिंदै आयो र मेरो कानमा बर्बरायो, ‘मैले त बिस्कुट किनिसकें । एउटा त खाई पनि सकें ।’
‘कतिबेला किनिस् ?’
‘तैंले चित्र बनाउने बेलामा ।’
‘नसोधी किन्ने ?’ मैले दाह्रा किटें । उसले मलिन स्वरमा भन्यो, ‘पार्टनर भनेको होइन ? मैले आफ्नो भागको पैसाले किनेको ।’
मेरा चिटचिट पसिना निस्किए । साले डिल्ली । के गर्ने ? डराएर हुन्न । मैले अलि आँटिलो आवाजमा भनें, ‘यै हो फिलिम, हेर्ने भए हेर, नभए जाऊ । बिक्री भइसकेको टिकेट फिर्ता हुन्न ।’
‘पैसा दिने भए दे, नत्र दाँत भाँच्दिन्छु,’ केटाहरूले धम्काए । अब कुटाइ खानुबाहेक अरू उपाय थिएन । होहल्ला हुन थालेपछि यादव सर तनावमा आए । उनले मेरो हात समाएर भने, ‘बुद्धिराम, प्रयास राम्रो गर्‍यौ ।’
यत्ति भनेर यादव सर निस्के । मलाई आस थियो— केटाहरूले हमला गरिहाले भने यादव सरले बचाउलान् । सर गएपछि मेरो ओठमुख प्याक्क सुक्यो ।
‘पैसा दोकानमा छ,’ अचानक मेरो मुखबाट निस्क्यो, ‘हिँड, उतै दिन्छु ।’
केटाहरू बाहिर निस्के ।
‘सामान लेर भाग है तँ !’ मैले डिल्लीलाई खुसुक्क भनें । डिल्ली तर्सियो । र, हतारिँदै सिरकको छेउलो निकाल्न गयो । म बाहिर निस्कें । आधा केटा दिदीको पसलतिर गइरहेका थिए, आधा मलाई कुरिरहेका थिए । मैले गोठछेउ ठड्याएको साइकल समाएँ । अलिअलि पैसा नबोकेर आएकोमा ग्लानि भइरह्यो ।
म साइकलको चेन झरेजस्तो गरेर साइकलमुन्तिर निहुरिएँ । म डिल्ली कति बेला भाग्छ भनेर हेरिरहेको थिएँ । पसलमा पुगेपछि त पैसा दिनैपर्थ्यो । त्यहीबेला डिल्ली सुत्त निस्कियो– फुत्त अँध्यारोमा हरायो ।
अब मेरो पालो थियो । केटाहरू आफ्नै सुरमा थिए । मैले सुकेको स्वरमा भनें, ‘पिसाब गर्छु ।’ अनि, अल्लि अँध्यारो ठाउँतिर सरें । साइकलको हेन्डिल बेस्मारी समाएँ । खुरुर्र दगुराएँ र ह्वात्त साइकलको गद्दीतिर उफ्रें ।
‘भाग्यो भाग्यो, समात समात,’ केटाहरू कराए । भ्यात्त–भ्यात्त दगुरेको आवाज आयो । मैले न्वारनदेखिको बल लगाएर साइकिल कुदाएँ । केटाहरू कराइरहेका थिए, ‘ठग्न पाइँदैन । भोलि यै बाटो त आउलास् !’ मभन्दा अगाडि डिल्ली घर पुगिसकेको रैछ । मलाई देखेर नजिक आयो । ‘तँलाई कुटे ?’ उसले सानो स्वरमा सोध्यो ।
‘नाई, म भागें ।’
‘बिस्कुट खान्छस् ?’ भन्दै डिल्लीले गोजीबाट आधा भइसकेको प्याकेट झिक्यो । मैले एउटा टुक्रा समाएँ तर खान सकिनँ । बिस्कुटको धूलो अङनारीमै चप्कियो । मुख सुक्खा भइसकेछ । म जति निल्ने कोसिस गर्थें, बिस्कुटको धूलो बालुवाझैं किरकिराउँदो हुन्थ्यो ।
‘सप्पै समान ल्याइस् ?’ मैले सोधें ।
‘काँ, म त डरले छेउलो मात्र बोकेर ल्याएँ,’ डिल्लीले भन्यो, ‘छेउलो त सिरकमा राखी पनि सकें । आइज, भात खान जाम ।’
मलाई फेरि प्रोजेक्टर लिन जाने आँट आएन । र, प्रोजेक्टरको मोह पनि हराइरहेको थियो । होस्, यत्ति दुःख गरेर कुटाइ खाने काम कसले गरोस् ! त्यत्रो पैसा स्वाह भयो । त्यत्रो पैसाले त टीकापुरमा मज्जाले फिलिम हेर्न पाइन्थ्यो— दस–पन्ध्रवटा । भोक मज्जाले लागेको रैछ, कपाकप भात खायौं । म ओछ्यानमा पल्टें । एकै छिनमा निद्राले भुस । निद्रामै थिएँ, कल्याङमल्याङ आवाजले ब्युझें । डिल्लीका बाआमा कराइरहेका थिए । मैले यस्सो चियाएँ । आमा भाडा माझ्दै थिइन् । उनी भन्दै थिइन्, ‘दिउँसो त धोको हो, के भएछ ।’
‘के भन्छे यो !’ सुत्ने तर्खरमा रैछन्, डिल्लाका बाको आवाज भित्रबाट आयो, ‘मूत गनाएर ओढ्नै नसकिने भा छ । मान्छेको मूतजस्तो पनि छैन ।’
‘केले मुतेछ ?’ आमा उठेर आइन्, ‘लौ छेउलोको एक छेउ त चिसै छ त । अनि, जताततै कालो टाटा । बाख्राको मूतजस्तो छ ।’
डिल्ली पनि ब्युँझियो । कान ठाडा पारेर सुन्न थाल्यो ।
‘ब्यान अग्लै ठाउँमा टाँगेको थें,’ आमाले भनिन् ।
‘लौ, अब उड्ने बाख्रो त पक्कै आएन होला,’ बाले भने, ‘कि उडीउडी तेरो छेउलोभरि मुतेर गको हो ?’
‘सुक्नेबित्तिकै छेउलो सिरकमा राखेर पट्टाएकी थेँ,’ आमैले भनिन्, ‘यो मटेरामा पनि के अचम्म हुन थालेको हो, खै ।’
उड्ने बाख्रो ? म खिस्स हाँसें ।
म बिहानै चिया खाएर कटासेतिर कुदें । प्रोजेक्टर डिल्लीलाई नै उपहार भो । केटाहरूले बाटोमा कुरेका रैनछन् । म बाँचें । सूर्यका तामाजस्ता कलिला किरणसँगै कटासे पुगें । अँगेनाछेउ बाआमा, दिदीदाइ, बहिनी सप्पै थिए । चिया पिउँदै थिए । म जाडोले कट्कटिदै भित्र पसें ।
मैले दाइतिर हेरें । मलाई हेरेर हाँसिरहेको रैछ । उसले ‘कति कमाइस् ?’ भनेर इसाराले सोध्यो । मैले हावामा औंलाले ‘शून्य’ बनाएँ । र, त्यो ‘शून्य’ मेरो सपनाको गहिरो कुवामा छप्ल्याक्क खस्यो ।
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ १२:१८